« Ogeysiiska Soo Iibsiga: Qalabka Korantada ee Tareenka Qaranka (TÜVASAŞ)
Ogaysiiska Ugaarsiga: Buundada Wooden, Line Wooden iyo Wooden Scissor Cross Beam »
Qalabka Dayactirka iyo Qalabka Dayactirka ayaa la iibsan doonaa
DIIWAANGALINTA GUUD EE TURKEY GUUD EE XILALKA GOBOLKA (TCDD) GUUD GUUD
Soo iibsiga alaabada 7da Gawaarida Dayactirka ah iyo Gawaarida Dayactirka ah waa in la iibsadaa si waafaqsan Qodobka 4734aad ee Sharciga Wax Soo iibsiga Dadweynaha ee no. Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan hindisada ayaa hoosta lagu bixiyay:
a) Magaca: GUUD GUUD EE RAILWAYS GOBOLKA (TCDD) GUUD GUUD
c) Telefoon iyo lambar fakis: 0 (312) 520 43 11 - 0 (312) 520 62 11
a) Magaca: Keenida 7 Gawaarida Dayactirka ah iyo Gawaarida Dayactirka ah
c) Goobta / Goobta la gaarsiinayo: TCDD waxay xaq u leedahay inay bedesho amarka gaariga 1aad ee gawaarida gawaarida iyo meelaha gaarsiinta qeybta 2-aad. Xisbiga 1aad (Mashiinka Prototype) Agaasime Ku-Xigeenka Mashiinka Gobolka 5aad; Qeybta 2-aad Gobolka 2aad ee Seminaarrada Farsamada, Gobolka 3aad, Meelaha Farsamooyinka, 7aad Aqoon-is-weydaarsiga Farsamada, Gobolka 1aad Aqoon-is-weydaarsiyo 4aad, Aqoon-isweydaarsiyo 6-aad Gobolka, Aqoon-is-weydaarsiyo XNUMX-aad oo Gobolka ah.
d) Waqtiga / taariikhda keenida: keenida iyo aqbalida gawaaridu waxay noqon doonaan dufcado. Kaliya hal gaari nooca nooca la dalbay ayaa lagu dari doonaa keenidda dufcadda ugu horreysa. Ka dib muddada tijaabada ah ee gawaarida tusaalaha ah, soo saarida tiro badan ee gawaarida kale ee haray sida ku qeexan qeexitaanka farsamada ayaa la bilaabi doonaa. Gawaarida waxaa loo keenayaa sida ku xusan jadwalka soo socda. Barnaamijka is dhiibiddu wuxuu bilaabmi doonaa kadib marka la saxeexo heshiiska. Qaybta 1aad Gawaarida Gawaarida: 1 Bilood Muddada Tijaabada Imtixaanka: 3 Bisha Kadib dhammaystirka muddada tijaabada ee gaariga nooca tareenka, tababarka iyo / ama nidaamka liisanka darawalka, waqtiga tijaabada ee gaariga wuxuu bilaabayaa diiwaanka loo diyaariyo inta udhaxeysa shirkada qandaraaslaha iyo mas'uuliyiinta TCDD taariikhda taarikhdana waa in gawaarida noocaan ah la bilaabo. waxay noqon doontaa taariikhda bilawga muddada tijaabada. (Laga soo bilaabo oggolaanshaha tusaalaha) Xisbiga 1aad 2 Gawaarida: 6 Bilood Ka dib aqbalaanshaha ku meel gaarka ah ee gawaarida, mudada ugu badan ee dhaafi doonta ilaa aqbalaadda ugu dambeysa ay noqon doonto 2 bilood.
a) Taariikhda iyo waqtiga loo qabtay: 22.01.2020 - 14: 30
b) Meesha lagu kulmayo ee gundhigga qandaraaska (cinwaanka halka looga furi doono hindise-bixiyeyaasha): TCDD Agaasimaha Guud ee Iibsashada iyo Qolka Kontaroolada Kontaroolka Qolka kulanka (dabaqa 3aad, qolka 4052)
Ogeysiinta Qaadashada: Adeegyada dayactirka iyo dayactirka ee basaska tareenka 2 waa la iibsan doonaa